Vaovao - Ahoana ny fanovana ny menaka mafana?
Fampisehoana ny menaka mafana: Fahombiazan'ny hafanana avo, fahamendrehana tsara, hafanana avo lenta ary coefficient amin'ny fitondra hafanana. Na izany aza, ny menaka mafana dia hitranga Fahazoana rojo eo anelanelan'ny atôma sy ny molekiola, ho simba ny fitehirizana ny mari-pana ambony. Ka nanolo-kevitra isaky ny roa taona hanova menaka mafana vaovao.
1. Vohay ny takelaka voasarona, asehoy ny toeran'ny lavaka voasakana, amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana Ampifandraiso amin'ny lavaka solika ilay lavaka voasakana.
2. Avy eo esory ny lavaka miharihary (esory koa ny ilany mifanohitra amin'ilay lavaka). Avelao hivoaka ny amponga solika ny menaka efa niasa.
3. Ny maodelin'ny menaka fanafanana dia Mobil 605. Rehefa mandrehitra solika, dia nosakanana ny lavaka amin'ny lafiny iray ary ny iray kosa mamadika ny tampon'ny tampon'ny avo indrindra.
4. Rehefa avy fenoy tanteraka ny diloilo amin'ny amponga solika dia ampodio ilay milina. Tsy afaka manafana ny hafanan'ny miasa toy ny mahazatra.
Ataovy 50 degre ny mari-pana, aorian'ny hafanana hatramin'ny 50 degre, miandry 20 minitra.
Avy eo mametraka temp. 90 degre, aorian'ny hafanana hatramin'ny 90 degre, miandry 20 minitra.
Avy eo apetraho amin'ny diplaoma 95, aorian'ny fanamafisana ny diplaoma 95, miandry 30 minitra.
Avy eo apetrakao 100 degre, aorian'ny hafanana 100 degre dia miandry 30 minitra.
Avy eo apetraho amin'ny diplaoma 105, aorian'ny manafana ny diplaoma 105, miandry 30 minitra.
Avy eo apetrakao 110 degre, aorian'ny manafana ny diplaoma 110, miandry 30 minitra.
Avy eo apetraho izy 115 degre, aorian'ny manafana mari-pahaizana 115, miandry 30 minitra.
Avy eo apetrakao 120 degre, aorian'ny manafana mari-pahaizana 120, miandry 30 minitra.
Avy eo dia afaka apetraka amin'ny 250 degre, hafanana mivantana hatramin'ny 250 degre.